bing + twitter = ezigbo oge ọchụchọ | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 22, 2009 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Microsoft weputara ihe ohuru maka nchoputa bing ha- twitter search. Ọ dị na bing.com/twitter ma dịrị ndụ. Dị ka Microsoft si kwuo, nke a bụ usoro dị mkpa maka ọchụchọ nke dabere na data oge dị iche na njikọ njikọ echekwara. Ihe ewu ewu na tweeter ga-enwekwa mmetụta na nsonaazụ ogo.
Google soro Microsoft ngwa ngwa (ị naghị anụ nke ahụ mgbe niile!) Wee maa ọkwa nke ha ezigbo oge twitter search emechaa ụbọchị.
Ikike ịchọọ na ezigbo oge bụ panacea maka ụlọ ọrụ njin ụlọ ọrụ ọchụchọ yana enwere m ike ịhụ ebe ijikọ iyi egwu mgbasa ozi ọha na eze kachasị ewu ewu nwere ike ịnye asọmpi asọmpi mana enwere m ike ịhụ ya ka ọ na-agbadata nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Si a ahịa n'ọnọdụ m chere na ọ nwere ike inye a oké ohere a na-elekọta mmadụ media savvy ụlọ ọrụ na-akwalite onwe ha ma ọ bụ ha na ngwaahịa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọchụchọ ejirila ike RSS rụọ ọrụ, nke a ga-egosi oke asọmpi - ebe ụlọ ọrụ nwere ike ịzaghachi ma meghachi omume na tweets oge! Ikwesiri imepụta ntaneti mkpuchi na asọmpi, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ozugbo ihe ọ rụpụtara ga-adị ndụ.
Gini na agunyeghi nsonaazụ twitter na nsonaazụ site na nchọta oge niile? Ọ bụrụ na m ga-aga na igwe nchọta dị iche iji chọọ nsonaazụ twitter gịnị kpatara na ọ bụghị naanị chọọ twitter na-eji tweetdeck, Seemic ma ọ bụ ndị ahịa desktọọpụ ndị ọzọ? Echiche?
Tags: apuinsonaazụ azụmahịaigwefoto +Cokeahịa mmadụ
Ọkt 23, 2009 na 1:44 AM
N'ịbụ ndị ejirila nyocha Twitter, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe ngwaọrụ wepụtara ịhapụ ịhapụ ozi a maka igwe ọchụchọ ebe ndị mmadụ nwere ike iwulite ngwa ndị ọzọ n'aka ha.
Ọkt 23, 2009 na 4:45 AM
Echere m na ihe kachasị adọrọ mmasị ị ga-achọ ebe a bụ na a ga-ahọpụta nsonaazụ ọchụchọ ezigbo oge dabere na ikike (retweets na # nke ndị na-eso ụzọ), nke a ga-etinye nrụgide dị ukwuu na azụmaahịa ka ha wee sonye na mkparịta ụka.
Inggbasa ozi na twitter ga-aghọ omume adịghị mkpa. Na-emetụta ndị mmadụ, na-edegharị ọdịnaya gị, ndị mmadụ na-agbakwunye gị na 'ndepụta' ma ọ bụ #FF bụ ebe ike niile bi.
Okwu a bu 'odi nkpa ugbua' bu mantra ohuru na webusaiti.
Ọkt 25, 2009 na 12:55 PM
Nnyocha Bing Twitter adịghị na mpaghara a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ọchụchọ Bing Twitter, gbanwee mpaghara gị na United States. "